Akụkọ - European ọkọlọtọ ígwè na British ọkọlọtọ ígwè
European ọkọlọtọ ígwè:
Akụkụ oghere ihe owuwu EN10210
A na-ahazi n'ichepụta ngalaba oghere dị ọkụ kpụrụ akpụ site na ọkọlọtọ European EN 10210-2006 1& 2.Hot kpụrụ oghere na-ahụ maka ohere nrụrụ dị elu gburugburu oghere oghere dị na diameten nke eluPIPE.
ka 1219mm, square na akụkụ anọ oghere ngalaba ruo nha nke 800mm na 35mm nke ọkpụrụkpụ36038 8e88
EN 10210 na-akọwapụta ọnọdụ nnyefe teknụzụ maka akụkụ okirikiri ọkụ mechiri, square ma ọ bụ akụkụ akụkụ anọ ma na-emetụta akụkụ oghere mepere emepe na-ekpo ọkụ, yana ma ọ bụ na-enweghị ọgwụgwọ okpomọkụ na-esote, ma ọ bụ mepụta oyi na ọgwụgwọ okpomọkụ na-esote iji nweta ọnọdụ ọla nha nha nke ndị enwetara na ya.
British ọkọlọtọ ígwè
A na-eji ígwè BRISTISH STANDARD n'ofe ụlọ ọrụ dị iche iche na n'ụdị dị iche iche. BSI British Standards na-enye ntụzịaka na nkọwapụta na ọnọdụ nnyefe teknụzụ maka ụdị ngwaahịa igwe dị iche iche, dịka igwe mpempe akwụkwọ na-ekpo ọkụ ma ọ bụ oyi, ngwaahịa emechara ọkara na igwe anaghị arụ ọrụ.
Akụkụ nhazi anyị bụ akara CE ma nwalee ya n'ụkpụrụ,
na-enye mma na mmesi obi ike maka ahịa ihe owuwu.
Ngwaahịa na-ekpo ọkụ akpọrepu maka ụdị nchara; na-ekpo ọkụ okokụre structural oghere ngalaba nke na-abụghị alloy na ezi ọka steels oyi kpụrụ welded structural oghere ngalaba nke na-abụghị alloy na ezi ọka steels.
Ntuziaka mmepe ;
European ọkọlọtọ ígwè na BRISTISH STANDARD Steel na-ọtụtụ ebe na-eji na nnukwu-ọnụ ọgụgụ na ezi size na kwụsiri ike arụmọrụSteel Ọdịdị engineering, àkwà mmiri ewu, shipbuilding.tower kreenu, ígwè nrụpụtaNa ndị ọzọ ubi.
Ọkọlọtọ Britain H beam bụ ụdị nchara arụ ọrụ akụ na ụba ọhụrụ. European ọkọlọtọ H ngalaba udi bụ echekwa na ezi uche, ezi n'ibu Njirimara, Rolling ngalaba nke ebe ndọtị bụ ihe edo, obere esịtidem nchegbu, tụnyere ndị nkịtị m ígwè, nwere nnukwu ngalaba modul, ìhè arọ, na-azọpụta uru nke metal, nwere ike ime ka ihe owuwu ụlọ belata 30-40%; Na n'ihi na nke ụkwụ ya n'ime na n'èzí yiri, ụkwụ ọgwụgwụ bụ a nri Angle, kpọkọtara n'ime components, nwere ike ịzọpụta ịgbado ọkụ, riveting workload ruo 25%. A na-ejikarị ya na nnukwu ụlọ na-achọ nnukwu ibu ibu na nkwụsi ike nke ngalaba.